Search - Tag - chaitanya mishra
‘पुँजीवाद र नेपाल’ आजको नेपाली समाजमा पुँजीवाद र यस्को प्रवृत्ति र स्वरुप बुझाउने कसरत हो । आजको नेपाली समाजमा पुँजीवादको स्वरुप कस्तो छ ? यसका व्यवहारहरु कस्तो छ ? नेपाली समाज मुलतः पुँजीवादी समाज हो कि होइन ? हो भने कसरी हो, होइन भने यस्को स्वरुप कस्तो छ ?, मुख्यतः यस किताब यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित छ । नेपाली समाजको विषयमा गहिरो अध्ययन र अनुसन्..